Iza sisa no tsy nofitahany ? – MyDago.com aime Madagascar
Iza sisa no tsy nofitahany ?
Ranomaso mangina ny an’ingahy Edgard, raha nandre fa voafitaky ny lehibeny izy, dia Rajoelina izany rehefa nilatsaka ho fidiana indray. Faly ihany anefa ity Edgard i ty, sat r ia vao lanin’ny
kongresy fa izy no atolotra ho filoha, dia efa betsaka no namingana azy tao anatin’ity TGV ity. Lasa ingahy PDS indray no fahavalo niombonan’ireo mpanongam-panjakana, fa tsy Ravalo intsony.
Miainga avy any ambony avokoa ny anton’izao, dia noho ny filazan’ingahy Rajoelina fa tsy hilatsaka izy, ary dia nikaon-doha ny mpikambana rehetra nandany vola sy ron-doha mba ahitana izay
lalan-kizorana ho an’ny antoko sy hiatrehana izay ho kandida. Indrisy anefa fa tsy nomeny lanja ilay kongresy fa nivadihany tamin’ny ora tsy nampoizina. Io fivadihandava io no maha-lasa saina ny
maro hoe, iza sisa no tsy nivadihan’ity Rajoelina ity? Ny vahoaka Malagasy efa im-piry nofitahany, ary toy izany ny sehatra iraisampirenena, dia io tratry ny fandrika maharary io indray ingahy
PDS. Mino isika fa na hilatsaka ho ben’ny tanàna eto Iarivo aza ity Edgard ity, dia mbola hisy fitaka hafa indray omena azy, satria mety ho vitany anie ny hilatsaka ho ben’ny tanàna rehefa tsy ho
lany filoham-pirenena eo ilaikely io, satria azo antoka fa ho resin-dramatoa Lalao Ravalomanana izy io e. Sa ahoana no mba fijerinareo mpamaky an’izany?
Nampidinin’ny SADC ho mpitarika TGV sisa i Andry Rajoelina !
3 pensées sur “Iza sisa no tsy nofitahany ?”
11 mai 2013 à 9 h 26 min
Aleo hifampitana ao ireo fa inona no hahagaga antsika amin’izany. Foza iray garaba tsy maintsy mifanetoka, izay voa manodidina;
11 mai 2013 à 10 h 39 min
Rehefa ny olona, na fanjakàna na koa fikambanana iray no nahavita sy tsy menatra ny manohana mpanongam-panjakàna, dia tsy azo hitokisana intsony , no dikan’izany !
Tsy mahagaga raha miady an-trano ny foza satria olona samy tsy hitoeran’ny fieritreretana, sy tsy mena-mivadika daholo !
Ny tolon-tsika no tsy maintsy atao mazava tsara, mba ho hitan’izao tontolo izao fa vahoaka mbola manana ny maha izy azy ny vahoaka malagasy ! Manantena aho fa mbola misy ambom-po na dia kely fotsiny sisa aza, mbola tafapetraka ao anatin-tsika tsirairay avy !
Ary ilaina dia ilaina ny mampiseho an’izany, indrindra manoloana an’ny toe-javatra tahak’izao !
[Paris ne veut pas devenir le « gendarme de l’Afrique », se gardant bien d’intervenir sans mandat de l’ONU et agit DE PREFERENCE DANS UN CADRE EUROPEEN.
La France « puissance africaine », membre permanente au conseil de sécurité de l’ONU, n’en garde pas moins une influence importante sur le continent. Le renouvellement des accords de défence avec plusieurs partenaires africains, CONFÈRE À LA FRANCE DES RESPONSABILITES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE, APPELEES À S’INSCRIRE DANS LA DUREE.]
Pour l’instant, il y a une énorme distorsion entre ce qui est raconté officiellement, et les réalités sur le terrain !
Nanoratra tany amin’ny filoha Jakaya Kikwete ny tenanay manaza ny hetahetan-bahoaka.Ho hita eo ny valiny.
Précédent Article précédent : Saribakoly fotsiny izany ilay Triumvirat
Suivant Article suivant : Mpaminany fopla